The Dead Center (2018) | MM Movie Store
အတိတျမပွေီ့း ရောကျလာတဲ့ လူနာတဈယောကျက သူဟာသပွေီးမှ ပွနျရှငျလာပွီး တမလှနျကနေ လူ့ဘဝကိုပွနျရောကျလာတာပါလို့ ပွောလိုကျခြိနျမှာတော့သူ့ရဲ့ တာဝနျခံဆရာဝနျတဈယောကျ လူနာရဲ့ပွောစကားတှကေို မယုံနိုငျဖွဈခဲ့ရပါတယျ ….
တမလှနျကနပွေနျလာတယျလို့ပွောတဲ့ လူနာမှာဆနျးကွတယျတဲ့အရာတဈခြို့ပါလာသလိုသူပွောတဲ့ တဈခြို့စကားတှဟောလညျး ထိနျ့လနျ့စရာအခြို့ပါရှိနခေဲ့တယျ…အဲ့ဒီလူနာရောကျလာပွီး မကွာခငျမှာပဲဆေးရုံရဲ့ အားထားရတဲ့ သူနာပွုတှထေဲကတဈယောကျရုတျတရကျ ကှယျလှနျသှားတဲ့အခါမှာတော့ ..
ဒီလူနာရဲ့ပုံမှနျမဟုတျတဲ့အပွုအမူတှကွေောငျ့သဆေုံးသှားတယျလို့ တဈခြို့တှကေ ယူဆနကွေတယျ…တာဝနျခံဆရာဝနျနဲ့ ဒီလူနာနဲ့ ဘယျလိုတှဆေကျဖွဈကွမလဲဆိုတာကိုတော့ခံစားကွညျ့ပါဦး…Horror, Mystery, Thriller အမြိုးအစားဖွဈတာနဲ့အညီရငျတထိတျထိတျနဲ့ ကွညျ့ရှုခံစားရမှာဖွဈပါတယျ…
အတိတ်မေ့ပြီး ရောက်လာတဲ့ လူနာတစ်ယောက်က သူဟာသေပြီးမှ ပြန်ရှင်လာပြီး တမလွန်ကနေ လူ့ဘဝကိုပြန်ရောက်လာတာပါလို့ ပြောလိုက်ချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့ တာဝန်ခံဆရာဝန်တစ်ယောက် လူနာရဲ့ပြောစကားတွေကို မယုံနိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် ….
တမလွန်ကနေပြန်လာတယ်လို့ပြောတဲ့ လူနာမှာဆန်းကြတယ်တဲ့အရာတစ်ချို့ပါလာသလိုသူပြောတဲ့ တစ်ချို့စကားတွေဟာလည်း ထိန့်လန့်စရာအချို့ပါရှိနေခဲ့တယ်…အဲ့ဒီလူနာရောက်လာပြီး မကြာခင်မှာပဲဆေးရုံရဲ့ အားထားရတဲ့ သူနာပြုတွေထဲကတစ်ယောက်ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာတော့ ..
ဒီလူနာရဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အပြုအမူတွေကြောင့်သေဆုံးသွားတယ်လို့ တစ်ချို့တွေက ယူဆနေကြတယ်…တာဝန်ခံဆရာဝန်နဲ့ ဒီလူနာနဲ့ ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲဆိုတာကိုတော့ခံစားကြည့်ပါဦး…Horror, Mystery, Thriller အမျိုးအစားဖြစ်တာနဲ့အညီရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ကြည့်ရှုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်…
9-1-1 (Season 2) ၊ အပိုငျး (၄)